Afro Curly Hair: Hairstyles, Best Products & Trends 2020 को लागि?
अफ्रो घुमाउरो कपाल वा त्यो afro curly हेर्दै लोकप्रियतामा बढ्दै गएको छ! त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहेकी थिईन। उनीहरुसँगको कुराकानीमा उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्। त्यसोभए घुमाउरो अफ्रूलाई आफ्नो महिमामा लगाउँछन्! अफ्रिका घुम्ने कपाल प्राकृतिक कपाल हो जुन सुन्दर गुंबद वा क्षेत्र को आकार जुन एक पारंपरिक afro जस्तै माथि बढ्छ र बाहिर छ, तर यो एक नरम भित्री उपस्थिति को बजाय एक घुमावदार उपस्थिति छ। केही न्युरलहरू ए्रोरोको बिरुद्ध हृदयमा आफ्नो घुमाउरो एफ्रो आकार लगाउँछन्, र त्यो पनि सुन्दर छ।
1 कपाल पसिना र लोकप्रिय प्रवृतिहरू
1.1 CURLY AFRO LOOKS प्राप्त गर्न को लागि: चट्टान कि घुमाव fro sis!
2 कसरी मेरो प्राकृतिक कपाल घुमाउने?
3 इन्स्टललिंग CLIP-INS
4 मानव बाल विस्तार र wigs
4.0.1 प्राकृतिक हाई ह्याक!
4.0.2 मलाई आशा छ कि यो उपयोगी थियो। अर्को पटक सिअ!
कपाल पसिना र लोकप्रिय प्रवृतिहरू
अफ्रो घुमेको बाल सधैं4कपाल बाहिर बढ्न वर्ष लाग्नको साथ पर्याय भएको छ। तर, विगमा हालको प्रगति संग, क्लिप-इन र किन्की बाल विस्तार, यस नजर को कभी खींचने को लागि अधिक प्राकृतिक कभी नहीं गएको छ। तपाईं केवल 10 मिनेट भित्र छोटो छोटो ग्लैमबाट मात्र गर्न सक्नुहुनेछ, तर यसले तपाइँसँग जन्मेको कपालको कपाल बनाउँछ। तपाईं अफ्रोरो घुर्को विस्तार विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ पहिले नै प्राकृतिक हुनुहुन्छ भने, म क्लिप इन्स स्थापना गर्न सुझाव दिन्छु। क्लिप इन्स प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईंको वास्तविक प्राकृतिक कपाल संग राम्रोसँग मिश्रण गर्नुहोस् किनकि तपाइँ सजिलै संग एक मोडि वा बान्ता घुटहरू संग कर्ल ढाँचा हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पछि मैले वर्णन गर्नेछु। यदि तपाइँसँग 3A 3b एक साँच्चै ढिलो कर्ल ढाँचा छ भने, यो तपाईंको कपाल अपेक्षाकृत छोटो नभएसम्म हेर्न को लागी अफ्रो प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ। तपाईं को लागि विभाजन को लागी, म एक पारंपरिक सील इन्स को सिफारिश गर्छु र बन्द. वा हाम्रो छोटो न्युबियन विग रेखा। सबै भन्दा राम्रो कर्ल ढाँचा किन्की कर्ली, कोइली वा अफ्रो किन्की संग्रह हुनेछ किनभने यो उत्तम एफ्रो घुमाउरो लाग्दछ!
CURLY AFRO LOOKS प्राप्त गर्न को लागि: चट्टान कि घुमाव fro sis!
सबैभन्दा राम्रो खोज कर्ली अफ्रो हासिल गर्न उत्तम तरिका यी सजिलो सल्लाहहरू पछ्याउन हो। तपाईंको नजरको आकारमा विचार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हो कि धैर्यता एक गुण हो। तपाईंको कपाल बाहिर निकाल्छ समय लाग्छ (धेरै धेरै र धेरै समय LOL) तर म तपाईंलाई केही रहस्यमा नकली गर्न यसलाई जब सम्म तपाईं यसलाई बनाउन दिनुहुनेछ! सुरू गरौं
कसरी मेरो प्राकृतिक कपाल घुमाउने?
यदि तपाईंको प्राकृतिक कपाल लामो र मोटो पर्याप्त छ भने, यो शैली बन्द गर्न सहज छ। तपाइँसँग पहिले नै 3c वा 4a प्राकृतिक बनावटहरू धुनु भन्दा बढी छ र त्यस शैलीलाई प्राप्त गर्न सम्भवतः सम्भव हुनेछ। यद्यपि, यदि तपाईसँग 4b 4c छ कपाल, यो कठिन हुन सक्छ प्राप्त त्यो आदर्श afro घुमक्कड हेर्न। यसको सट्टा, तपाईं आफ्नो कर्ल ढाँचा मा हेरफेर गर्न मोटो बाहिर वा बान्ता गुटहरू गर्न आवश्यक पर्दछ।
त्यहाँ कसरी स्थापना गर्न प्रदर्शन गर्ने भिडियो ट्यूटोरियल छ यस पेज मा afro kinky घुल्ली क्लिप इन्स एक मध्यम लम्बाई तल afro सिर्जना गर्न को लागी!
यो विशेषता बनावट दुई पछि खोजी गरिएको छई अफ्रिकी अमेरिकन समुदायहरूमा यसको हालै लोकप्रियता।
यदि तपाइँसँग घुमेको अफ्रोलाई टाढा मोटाई वा लम्बाइ छैन भने, तपाइँ सधैँ क्लिप इन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको साथ मेल खाने प्राकृतिक विस्तार पाउनुहोस् वास्तविक बाल बनावट, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ; अन्यथा, तपाईंको कपाल राम्रोसँग मेल खाँदैन। म छोटो लम्बाइको अनुशंसा गर्छु ताकि बालले गम प्रभाव पार्नेछ। 10 "वा 12" राम्रो काम गर्दछ र तपाईंलाई क्लिपको 1.5-2 सेट आवश्यक पर्दछ। आफ्नो बालों मा क्लिप इन्स लागू गर्नुहोस्। अब यसको समय शैली र बालको आकार। घुम्न खोज्नुको लागि तपाईलाई कपाल मोडिदिनु वा बान्ता बुटहरू सिर्जना गर्न आवश्यक पर्दछ बन्सीय कर्ल बनाउँदछ। टाढा सुक्खा छिटो, र यसको सजिलो रातमा क्लिपहरू लागू हुन्छ, कपाललाई मोर्साइदिनुहोस् र त्यसोभए बिहानको न्यानो गर्नुहोस्। यद्यपि, Bantu गुटहरू उत्तम afro घुमाउरो रूप सिर्जना गर्छन्। बान्ता गुट बाहिर गर्न को लागी गिरावट यो छ कि यो सदाको लागि सुत्न लाग्दछ त्यसैले तपाईलाई हुड ड्रायर भित्र बस्न सक्दछ। एक राम्रो लग मोडा बाहिर जाने प्रयास गर्दा एक अनिवार्य कारक भारी र कठोर क्यान्सरबाट बच्नको लागि हो। यसले तपाईंलाई असुविधा कम गर्दछ र तपाईंको Afro घुमाई बाल स्टाइलको लागि धेरै अधिक व्यवस्थित हुन अनुमति दिन्छ।
मानव बाल विस्तार र wigs
Afro curly look प्राप्त गर्न को लागि सबै भन्दा आसान र सबै भन्दा प्रचलन विधि wigs को प्रयोग गर्नु हो! तपाईं केवल कुनै पनि शैली, रङ, आकार, र कर्ल ढाँचा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले मात्र केहि प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ एक स्थापित कपडे कोन्की कर्ली विग यो जस्तै स्थापित!
म कम Nubian Coily विग को प्रयोग गरेर सिफारिस गर्न सिफारिस गर्दछु तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ कर्ल आकार र परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ अनुहारको कपाल. तपाईं धोका गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै स्टाइल सेटिङ जस्तै मोड आउट र बान्ता गन बहिष्कार वा afro crochet कपाल स्थापना.
प्राकृतिक हाई ह्याक!
तपाईंले आफ्नो कपाल सक्रिय पार्नु यो सबै पृथ्वी ऋतुहरूको समयमा बढी व्यवस्थित बनाउनको लागि। यद्यपि, यो गर्मीको, यो स्पष्ट हुन्छ कि एक सुरक्षित सुरक्षा शैली सम्भवतया उत्तम मार्ग हुन सक्छ। यद्यपि यो मामला हुन सक्छ, हामी सबैलाई हाम्रा किन्की घुम्न मन पराउँछौं ट्रेस! कसले सुरक्षा शैली सबैको समय चाहानुहुन्छ ??? यदि तपाईं आफ्नो एफ्रो घुली कपाल चट्टान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ वा तपाईं यो गर्मीको लागि घुमाउनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो छोटो चिसो राख्नु भएको छ।
गुणस्तर पिक प्रयोग गरेर लामो बाटो जान सक्छ। चम्किलो अनुहार छान्नुहोस्, तपाईंको कपाललाई तान्नु सक्छ, खासकर यदि यो सुकेको छ वा तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। तथापि, स्थिरता को सही मात्रा संग, तपाईं स्वाभाविक रूप मा जाने को लागि शैली मा अधिक आरामदायक हुन को लागी अधिक सतत हुन शुरू हुन्छ। तथापि, हामी छोडि-इन कंडीशनर प्रयोग गर्ने सिफारिस गर्दछौं जसले तपाईंको सबैभन्दा राम्रो कर्ल ढाँचा सूट गर्दछ र केवल रूटबाट छनोट गर्दछ। बिस्तारै रूटबाट लिनुहोस् र उठाउनुहोस्। यसले थप भोल्युम सिर्जना गर्नेछ र तपाईंको कपाल माथि ज्वरो लाग्ने रूप सिर्जना गर्न खडा हुन्छ! यदि तपाईंको कपाल पतली हो भने तपाईले राम्रो बालबालिकालाई राम्रोसँग आफ्नो बाल शाफ्टको बीचमा घुम्न सक्नुहुनेछ र बाटा आउट गर्नुहोला!
मलाई आशा छ कि यो उपयोगी थियो। अर्को पटक सिअ!
ब्ल्याक मेनका लागि उत्तम दाई हेरविचार उत्पादन
कसरी कुकिनी कपाल घुम्न कपाल घुमाउनुहोस्
गोठालोको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? यहाँ केही सुझावहरू छन्!
अफ्रो किन्की बन्द